Kuvanza Kuzvinyora Kwako Haisi Yekuchengetedza Isu | Martech Zone
Kuvanza Kuzvinyora Kwako Haisi Yekuchengetedza Isu
Svondo, Nyamavhuvhu 26, 2012 Svondo, Nyamavhuvhu 26, 2012 Douglas Karr
Isu tinoongorora yakawanda yemasevhisi kuti tikwanise kunyora nezvavo pa blog kana kuishandisa ivo vedu vatengi. Imwe nzira yatinotanga kuona yakawanda uye yakawanda masevhisi ayo anotendera iwe kuti utange account nyore, asi vanoshaya nzira dzekudzima. Handifunge kuti uku kutarisira… uye zvinobva zvangondidzosera kukambani.
Ndapedza maminetsi gumi nemashanu mangwanani ano ndichiita izvozvi. Yemagariro midhiya yekutarisa sevhisi yakapa a free trial saka ndakanyoresa. Mushure memavhiki maviri, ndakatanga kuwana maemail aindinyevera kuti kutongwa kwangu kwainge kwapera. Mushure memazuva makumi matatu, ini ndakatanga kugamuchira maemail ezuva nezuva aindiudza kuti temu yangu yainge yapera uye ndaive neiyi link yekuti kwandinogona kukwidziridza kuenda kuaccount account.
Iko email kuzvinyorera chinongedzo wakandiunza kune account account peji. Grrr… kuita login kuti kuzvinyora ndeimwe dzinovaraidza peeve yangu. Sezvo ini ndanga ndichipinda mukati zvakadaro, ndakafunga kuti ndinodzima account. Ini ndakaenda kune iyo account account peji uye chete sarudzo dzaive dzakasiyana kusimudzira sarudzo - hapana kukanzura sarudzo. Kunyangwe mune yakadhindwa yakanaka.
Ehe, pakanga pasina zvakare nzira yekukumbira rutsigiro. Ingori FAQ. Kuongorora nekukurumidza kweiyo FAQs uye hapana ruzivo rwekudzima account. Nekutenda, kutsvaga kwemukati kweiyo FAQ kwakapa mhinduro. Kanzura chinongedzo chakavigwa mune isina kujeka tebhu mukati meiyo mushandisi purogiramu.
Izvi zvinondiyeuchidza nezveindasitiri yemapepanhau… kwaunogona kusaina online, asi unofanirwa kufona uye kumirira wakabata kuti utaure nemumiriri webasa revatengi kuti abvise kunyorera kwako. Uye… pachinzvimbo chekumisa, vanoedza kukupa dzimwe sarudzo dzekunyorera uye zvipo. Ndanga ndichifonera vanhu ava kwandave ndakatsamwa zvekuti ndakangodzokorora "kukanzura account yangu" kasingaperi kusvikira vateerera.
Vazhinji, kana ichi chiri chenyu nzira yekuchengetedza, une rimwe basa raunofanira kuita. Uye, urikubata matambudziko nechigadzirwa chako kana sevhisi nekuvhara kwako kwechokwadi kuchengetedzwa kwevatengi. Stop it! Kuchenesa chigadzirwa kana sevhisi kunofanirwa kunge kuri nyore sekusainira imwe.
Nei Yako Inotevera Bhizinesi Komputa Inofanirwa kuve Mac
Aug 27, 2012 na7:26 PM
Zvinondishungurudza zvakanyanya pandinoona izvozvo. Kana ndangowana email ine yakashata yekusanyoresa link ndinoimaka sespam uye kana izvo zvisingabatsire, gadzira mutemo wekungodzidzima ipapo ipapo.